Nagu saabsan - Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd.
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2006, wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo iibinta warshadaha amniga. Waxaan u fidineynaa dhammaan noocyada wax soo saarka CCTV ee macaamiisha adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Smart Face Detections / Face IDH.265 NVR, Smart IP Camera, Smart 5 IN 1 XVR, xirfadlayaal iyo waxqabad sare HD Kaamirooyinka, WiFi Kaamirooyinka iyo WiFi NVR Qalabka, 4G / Wifi Solar Camera . Maaddaama mid ka mid ah soosaarayaasha hormuudka ka ah Shiinaha, Aopvision waxaa loo heellan yahay inay bixiso tikniyoolajiyad heer sare ah, wax soo saar tayo leh, iyo adeeg xirfadeed.
Aopvision waxay leedahay uruurinta awoodaha R&D, waxayna ku qaadatay khibrad sanado ah warshadaha amniga ee Shiinaha. Kuwaas kor ku xusan waxay Aopvision ka dhigayaan barxad tiknoolajiyadeed oo heer sare ah. Shirkaddu waxay qaadataa nidaamka maareynta ganacsiga ee horumarsan iyo nidaamka OA-da casriga ah, waxayna sameysaa qaab wax soo saar sedex-iyo-mid ah oo leh TQC, TPS iyo TPM.
Aopvision waxay si adag u fulisaa maareynta QC waxtarka shaqada iyo hoos u dhaca sidoo kale. Sidaa darteed, Waxaan helnay Shahaadada Tayada Caalamiga ah ee ISO2008 iyo Shahaadada Maareynta Caalamiga ah ee ISO14001; Intaa waxaa sii dheer, alaabadayada taxanaha ah waxaa lagu ansixiyay shahaadooyinka RoHS, CE iyo FCC, oo siinaya macaamiisha tayo iyo alaab tartan ah iyo adeeg aad u fiican kadib iibka.
Wax soo saarka Aopvision waxaa si ballaaran loogu dabaqaa shirkadaha, dhismayaasha caqliga badan, hudheelada & suuqyada, iyo guryaha iwm. Waqtigan xaadirka ah, badeecadeena waxaa si guul leh loogu aqoonsaday America, Canada, Japan, Britain, Germany iyo dalal kale iyo gobollo kale.
Aopvision waxay ku adkeysaneysaa fikirka horumarka guud iyo iswaafajinta, waxayna nafteeda u hurtaa inay ka dhigto nolosha dadka nabad iyo amaan adduunka oo dhan.
"Ammaan badan, Caqli badan", tani waa himiladeenna!
Aopvision way sii wadi doontaa inay ilaaliso ruuxda ganacsi ee "Iskuxidhnaanta Tababarida Xirfad Leh", waxay sii wadi doontaa hormarinta, sahaminta iyo abuurista goobta la socoshada fiidiyowga, si loo soo saaro alaab tayo sare leh oo qiimo badan wax ku ool ah, isla markaana u abuurta qiimaha ugu weyn macaamiisha.
Fikradda Maareynta: Waxaan u hoggaansameynaa "suuqa marka hore, marka hore macmiilka", u janjeedhinta suuqyada iyo macaamilka oo ah fikradda maareynta asaasiga ah. Waxaan si adag u shaqeynaynay si joogto ah u cusbooneysiinta badeecada oo aan u hagaajinno adeeggayaga. Waligeen waan idinla joognay.
Nidaamka Tayada: Waxaan dejinay xarumo wax soo saar iyo xarumo tayo leh, waxaan dejineynaa nidaam kontaroolo tayo leh oo adag. Dhammaan alaabooyinka waxaa mara tijaabo adag oo lagu kalsoonaan karo iyo tijaabinta deegaanka ka hor rarka. Waxaan si buuxda u hirgelineynaa nidaamka ISO9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada iyo shahaadada la helay.
Nidaamka Deegaanka: Waxaan helnay shahaadada ISO14001, si loo hubiyo in shirkaddu aysan wax saameyn ah ku yeelanayn deegaanka.Waxaan helnay shahaadada ROHS, dhammaan alaabteenna iyo qaybaha wax soo saarkeenna waxaa lagu soo saaray heerarka ROHS.
1-Horusocodka Panasonic NPM SMT Line, Xawaare sare, oo lagu daray Yamaha SMT LINE
2-Deji Heer-kul Sare Hawada Hawada
3-Line Line Line
4-Kooxda R&D team ee abput 50 qof
Awoodda Billaha Qty: 200K Kaamirooyinka, 30K-50K ee DVR / NVR